Aabaha iyo Jacaylka Ubadka (Faatoxo)
Waxaa mahad idilkeed ay u sugnaatay Allaha Aduunka idilkii maamulkiisa haya, Dadka qaar u hibeeyay gabdho, qaarna wiilal, kuwana isugu daray labadaba, qaarna ka dhigay ma dhalays; Nabi Moxamed nabad galyo iyo naxariis ha ahaato korkiisa, uu noo sheegay in dhamaantayo aan masuul nahay, masuuliyadaasna nala waydiin doono.
Intaa ka dib, waxaa igu dhaliyey qoraalka maqaalkan:
1. Ka dib markii aan amin dambe, habayn isbuucii dhawaa dhexdiisa ah, aan Magaalada London, aan ku arkay koox gabdho da’ yar ah, oo waqti ila qaldan magaalada dhex mushaaxayey, dhaqan haboonina uusan ka muuqan, ayaan waxaan is waydiiyay, horta imisa ayaan ilmaha jecel nahay, hadii aan Aabeyaal nahay?
2. Maqaaladii aan horay u qoray oo bogaga internka qaarkood soo gudbiyeen “Waa sidee Waalidka Wanaagsani? iyo Hooyada Wanaagsan iyo barbaarinta ubadka” oo dad badani uu waxtar ku sheegay, ayna i waydiiyeen inaan wax ka qoro maqaalo la xiriira arimaha barbaarinta ubadka.
Waxay u muuqataa mid aad u fudud, oo aan waxbadan sheegayn su’aashayda ahayd imisuu yahay jacaylka Aabaha ubadkiisa?, waxaa laga yaabaa in aanuba qofna iswaydiin, micnaha jacaylka dhabta ah iyo waxa ka dhalanaya.
Waxaan niri imisuu lee’g yahay, kamadaasi(imisa) waxay u baahan tahay halbeeg wax lagu qiyaaso? tusaale, hadii aan dhahno Alle waan jeclahay, waxa jacaylkaa lagu qiyaasi karaa intaad amkiisa raacdo, wuxuu kaa reebana ka harto, taasoo ah Taqwadda Alle. Hadii aad Rasuulka(SCW) aad jeceshay waa inaad sunadiisa raacdaa, waana taa qiyaaska jacaylka rasuulka.
Hadaba jacaylka ubadku waxa lagu qiyaaso waa kuma?; Ma inaad dhibaatada dagaalada, gaajada Afrika aad dunidda la dhoho way horumartay sida Yurub ka keentaa?, Ma inaad ugado dharka kan ugu qaalisan sida noocyada lagu dhajiyo calaamadaha Asliga ah u gado, Taleefoonkii u danbeeyey, Ipod-kii ama MP3-gii u dambeeyey, Cayaaro elektaroonik ah oo qaali ah oo isdaba joog ah, markastana ay maqaaxiyaha Mc Downal iyo kuwa la midka ah ay wax ka cunaanba?; Waxaan hubaa, in umadeena Soomaaliyeed in badani ay jawaabtoodu tahay Haa, hadii ay suuragal ii tahay, ilmahayga jacaylkooda intaa ayaan ku muujinayaa. waxaaba jirta in in badani inay arintkaa ku guulaystaan ay har iyo habayn u shaqaynayaan, oo geed gaaban iyo geed dheerba u marayaan.
Waxaan jeclahay inaad ila aragtaan, aragtidayda ku aadan xaqiiqda jacaylaka ubadku; Waxaa Alle noo sheegay in hodantinimada iyo Arsaaqda xagiisa ka timaado, oo isagu masu’uuliyadeeda uu qaaday, waxa uun nala waydiiyay inaan asbaab suuban aan la nimaadno. Waxaa cad,in qofka liibaanay oo guulaysta uu yahay, sida Alle noo sheegay qofkii Cadaabka Alle laga koriyo, Janadiisana la galiyo. Waxaan hubaa qofkii ilmihisaa kala soo cararay dagaaladda, gaajada iyo rafaadka aduunka u muuqda, inuusan u ogolaadeen ilmihiisa cadaabka Alle. Hadaba waa tan Jawaabtu hadii aan ubadkeena dhab ahaan jecel nahay, waa inaan u diyarinaa asbaabaha ay cadaabkii Alle uga kori la haayeen, waayo iyaadaa qiyaaska dhabta ah, guushuna ku jirtaa.
Hadaba waa sidee sida aan Jacaylka dhabta ah aa ku muu jin karno ficil ahaan?
Jacaylka ilmuhu waxa uu la xiriiraa koriimadooda, oo waalidka waajib ka saaran yahay. hadaba koriimada waxaan u kala qaadaynaa: koriinka Jirka iyo koriinka nafsadda. koriinka jirka iyo dhaqaalaytiisa Alle ayaa xilkeeda qaaday, oo dhibkeedu ma badna, waana taa tan dad badani uu mashquul ku yahay. Koriinka naftiisa ama ruuxdiisa, taasoo ka tarjumidoonta akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa danbe,waxaa lagu muujin karaa; In labada waalid ay guurkooda isku xushaan Diin iyo Akhlaaq, si Alle u siiyo ubad waalid hagagsan oo ay ku daydaan hela. “Hiilka Waalidka ubadkiisa”
Iyada oo marka laga bilaabo calool galkiisa, laga xirsi xiro Shaydaan oo la akhristo ducooyinka Rasuulku (SCW) laga soo wariyey, si looga talaalo dhibaatooyinka Shaydaanka.
Aabaha jecel ilmahiisa, jacaylkaa waxa uu keenaa, in hadii uu lahaa dhaqamo xun xun, uu joojiyo si uu kudasho ficiin ubadkiisa ugu muujiyo intay korayaan. In inta uu yar yahay lagu ababiyo dhaqanka toosan, jacaylka Alle iyo Rasuul (SCW). Hadaba hadii ay noo cadaatay halbeegii ama qiyaasihii jacaylka ubadku, aan u soo laabano su’aasheenii intee inle’eg ayay abaabayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qurba jooga ah ay ubadkooda jecel yihiin?!
Aniga oo su’aasha jawaabteeda u daynaya Ninwalba iyo Naftiisa, Hadana waxaa aad u muuqata, in maanta Aabayaal badani aysan kaalintii la rabay ka soo bixin. Waxaana haboon in masu’uuliyadda qooska iyo ubadka Aabayaashu dib u fiiriyaan. Waxaa haboon in Aabayaasha qurba joogu, ay maanta muhiimada siiyaan koriimadda Ruuxda ubadka.
In isbadal dagdeg ah ay sameeyaan Abayaashu, oo ay wadatashadaan meel kasta oo ay joogaan, si ay uga badbaadiyaan ilmihooda qurbaha jooga oo dariiqo xun u batay, sababka dhabta ahina yahay Aabayaasha oo gabay jacaylkii dhabta ahaa.
Aniga oo idinka raali galininaya aqoontayda oo ku yar maadadaan, waxaan Eebe wayne waydniiynaa inuu naga dhigo kuwo fahma sababkii loo abuuray, Aaduunka iyo Aakhiradana liibaana, Ubadkana waxa wanaagoodu ku jiro Alle ha jeclaysiiyo, Allena hana noo xafido. Aamiin.
Wa bi_Allahi Towfiiq.